Mawduuca, Xiriirinta iyo Xeeladaha muhiimka ah ee loogu talagalay 2016 SEO | Martech Zone
Mawduuca, Xiriirinta iyo Xeeladaha Muhiimka ah ee loogu talagalay 2016 SEO
Axad, Maarso 13, 2016 Axad, Maarso 13, 2016 Douglas Karr
Waxaan daacad u noqon doonaa in intaa ka sii badan ee aan ka helayno isbeddelada algorithm ee dhowr sano ka hor, in yar oo aan arko qalabka hagaajinta mashiinka raadinta iyo adeegyadu sidii ay ahaan jireen oo kale. Ha ku khaldin taas muhiimadda SEO. Raadinta dabiiciga ahi wali waa istiraatiijiyad aad ufiican oo hufan oo lagu heli karo soo-booqdayaasha cusub. Dhibaatadaydu maaha mid dhexdhexaad ah; waxay la socotaa aaladaha iyo khubarada halkaas ku sugan oo wali dabada ka riixaya istiraatiijiyado dhowr sano ka hor ah oo aan si fudud u shaqeyn karin.
Marka ay timaado wakaaladaha, waxaan iska fogeyn lahaa in aan kireysto hay'ad SEO ah meeshii wakaaladda suuq geynta waxyaabaha fahmay ee SEO ah. Waa fekerkeyga kaliya, laakiin an hay'adda taas oo fahmeysa sumadeynta iyo fariinta, horumarinta nuxurka warbaahinta badan, hagaajinta rogista, iyo istaraatiijiyadaha warbaahinta ee iskutallaabta (oo ay kujiraan kasbashada, lahaanshaha, mushaharka iyo wadaagida warbaahinta) way ku kici karaan qarash badan laakiin waxay horseedi doonaan natiijooyin aad uga wanaagsan.
Taas macnaheedu maahan in dhamaan wakaaladaha raadinta dabiiciga aysan fahmin isbeddelada dhacay. Sawir gacmeedkan ka yimid Dilate, Xeeladaha ugu dambeeyay ee ugu awooda badan SEO-ga ugu awooda badan 6 2016 Talooyin iyo Qalab, wuxuu faahfaahinayaa xeelado badan.
Infographic wuxuu daboolayaa walxaha waaweyn ee SEO ee la tixgelinayo 2016, oo ay ku jiraan cilmi-baarista ereyga, SEO-bogga, SEO-ga oo dhan, bogga saaxiibtinimo ee wareega, dhismaha isku xirka 2016, suuq-geynta waxyaabaha, & SEO-ga wareega. Waxa kale oo jira tilmaamo waxtar leh dhamaadka si laguu tuso kordhinta Chrome iyo boggaga warka ayaa kuugu anfici kara dadaalkaaga SEO.
Haddii aan soo koobo waxa sii wado natiijooyinka cajiibka ah ee macaamiisheenna, waxaan taxan lahaa istaraatiijiyadaha ay adeegsato Dilate, laakiin waxaan wax ka beddeli lahaa sida mid walba loo howlgaliyay iyo sababta:
Cilmi-Keyword - Falanqaynta istiraatiijiyadda astaanta iyo cilmi baarista shaqsiga iibsadaha, horumarinta degel cashuurta iyo maktabadda waa muhiim.
On-Page SEO - halka canaasiirta on bogga SEO ah waa kuwo muhiim ah, Waxaan fiiro gaar ah u yeelan lahaa sida tartamayaashu ugu guuleystaan ​​raadinta bogaggaaga. Bogag dhammaystiran oo leh cinwaano, cinwaano-hoosaadyo, liisaska bulsheed, sawirro, jaantusyo, jaantusyo, fiidiyowyo iyo sawir-gacmeedyo ayaa guuleysan doona markay bixiyaan qiime ka badan kuwa kula tartamaya.
Goob-saaxiibtinimo-Wareeg ah - markale, aan sii qaadno tallaabadaas dheeraad ah. Dhismaha ka sokow bogagga jawaabta leh, fahamka sida loo hirgaliyo tikniyoolajiyadda cusub sida Degdeg Bogagga Mobillada waxay qaadan doontaa muhiimad weyn iyo ka weyn. Maaha in la sheego Maqaallada degdegga ah ee Facebook iyo Foomamka Apple News.
Dhisitaanka Xiriirka - Ux Waan necbahay ereygaas runtiina ma dareemayo inay danta kuugu fiican tahay inaad dabagasho. Waxaan doorbidi lahaa dhismaha maamulka dowlada ama kasbashada. Fursadaha warbaahineed ee kasbaday ee xiriirka dadweynaha kaliya ma bixin doonaan miisaanka darajada, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu bartilmaameedsado dhagaystayaasha saxda ah. Jooji raadinta meelo aad ku dhajiso xiriiriyeyaasha oo aad bilowdid raadinta boggaga iyo saamileyaasha kori doona gaadhistaada, wacyigaaga iyo xujo warshadahaaga.
Content Suuq - Horumarinta a maktabadda taas oo qiimo siinaysa dhagaystayaashaada, ay wadaagaan bulshadaada, isla markaana ay u aqoonsan yihiin asxaabtaadu maadada wax ku oolka ah ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo martida dabiiciga ah.
Wareeg SEO - Adeegyada juqraafi waxay door weyn ka ciyaaraan hagaajinta mashiinka raadinta maxalliga ah waxayna ahayd inay liiskan soo saaraan. Google waxay fiiro gaar ah siisaa meesha adeegsadaha raadintu ku yaalo, maahan oo kaliya waxa ay raadinayaan. Raadinta moobiilka ee Indianapolis si fudud uma soo saari doonto natiijooyin isku mid ah San Francisco (waana inaysan aheyn).
Dalbo macluumaad xog ah
waxaan qabaa xawaaraha waxay ahayd inay ahaato qodobka ugu sareeya ee xogtan maaddaama aanan hubin inay wax uun saamayn weyn ku leeyihiin labada darajo, dabeecadaha isticmaalaha, iyo beddelaadda. Goobaha degdegga ahi waa muhiim - sidaas darteed faafidda sawirka, shabakadaha gaarsiinta waxyaabaha iyo marti soomi wax walba!
Tags: 2016cdnshabakada bixinta nuxurkaContent Suuqmartigalin deg deg ahfaafidda sawirkacilmi keywrodisku xirka dhismahaMacluumaadka Suuqgeyntaseo mobilebogagga moobiilka ku habboonbogga seoraadinta dabiiciga ahxawaaraha bogganaqshadeynta websaydhkaSEOcunsuriyadatilmaamaha seoqalabka seoxawaaraha goobta
Talooyinka Ololaha faleebo ee Emailka, Tusaalooyinka, Tirakoobka iyo Dhaqannada ugu Fiican
Sidaad sheegtay mid waa inuu xoogga saaraa dhanka seo mobile.